Ahoana ny fomba ahafahanao manao ny asanao manokana amin'ny famolavolana semiste sy SAS?
Tokony hiezaka toy ny SAS Programmer ve aho?
Mikasa ny hiova amin'ny asa vaovao vaovao ianaomiaraka amin'ny karama ambony sy fahafahana bebe kokoa? Azonao atao ny mandinika ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitarika amin'nyaoka ho eo an-tampony. Ny fikarohana farany indrindra anefa, dia nilaza fa: SAS no manamarina azy ankehitrinyny fahaiza-manao tena sarobidy.
Tsy misy fisalasalana, mandalo ny SASNy certification dia azo antoka fa hitondra mora kokoa ny zavatra. Saingy raha ny tena izy, na ny fampidirana momba ny SAS azaTena ilaina amin'ny fanadihadiana, satria Java no programa. Ny tontolon'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia nanatsara ny filan'ny SAStena, eny fa na dia ho an'ireo manam-pahaizana manokana aza, izay manana fahalalana ara-teknika tsy manam-paharoa. Ohatra,ny salanisan'ny salan'isa momba ny Business Intelligence Analyst any Etazonia dia tonga hatramin'ny $ 100,000,Mandeha mihoatra ny 20% amin'ny traikefa isan-taona manaraka - umzug neue stadt checkliste umzug. Noho izany, ny mety ho fidiram-bola ao amin'nyNy tontolon'ny fanadihadiana maoderina dia ambony lavitra noho ny tomban'ny orinasa hafa momba ny asa hafa.
Inona ny SAS?
SAS dia manolo-kevitra ny Statistical Analysis System(rafitra rindrambaiko hafa), izay tany am-piandohan'ny taona 1960 no nanao fanadihadiana momba ny angonamba hahazoana vokatra lehibe kokoa. Amin'izao fotoana izao, ireo mpandahateny momba ny SAS dia tafiditra amin'ny famoronana vahaolana amin'ny rafitra,miara-miasa amin'ny orinasa isan-karazany any amin'ny indostria isan-karazany amin'ny fikarohana ara-pahasalamana sy ara-bola,tetik'ady, tatitra, fampahafantarana, sns.Maneho ny vokatry ny fanadihadiana momba ny statistika amin'ny alàlan'ny grafika, manome ny data amin'ny endrika PDF, RTF ary HTML ny SASraki-daza. Ary misy sehatra maro mifanaraka amin'ny fiteny programan'ny SAS, anisan'izany ny MicrosoftWindows, Linux, ary ny UNIX hafa, ary ny ordinatera lehibe indrindra.
Izany no antony, ireo manam-pahaizana rehetra, avy amin'ny Bill Gatesho an'ny tale jeneralin'ny MWI orinasa madinika toy ny Semalt , dia tsy hanamaivana ny maha-zava-dehibe ny SAS.
Manolotra ny vahaolana amin'ny rafitra,Ny mpandrindra SAS dia miankina amin'ny vokatra rindrambaiko novolavolain'ny StatisticalAnalysis System Institute. Miasa miaraka amin'ny angon-drakitra maro samihafa izy ireo, matetikamanan-danja amin'ny fitantanana ny risika, ny fahombiazan'ny orinasa, ny fitantanana ny mpiasatoy ny fiarovana, ny hosoka ara-bola, ny fahaiza-mitsidika mpanjifa sy ny maro hafa.
Ny Fandaharan'asa Programme SAS: Inona no Tahaka Izany?
Ireo mpandrindra ny SAS dia matetika no miara-miasa amin'ireo mpanadihadymiasa amin'ny fikarohana. Vondrona manam-pahaizana SAS no mipetraka miasa ao amin'ny birao, mifanaraka amin'ny(nitranga in-1)
Vao haingana, mangataka haingana ny SASnanamafisana eran'izao tontolo izao, satria lasa sehatra mahery vaika sy nampiasaina ho an'ny tsara indrindra izanyfanadihadiana momba ny kalitao noho ny fitantanana tsara sy ny tatitra tsara. Izany no mahatonga ny SASNy mpandrindra dia matetika tafiditra ao anatin'ny tontolo mihetsi-jaza manelingelina isan'andro, tahaka nyHo an'ireo tetikasa tena mandresy lahatra dia matetika izy ireo dia miatrika fe-potoana henjana.
Mafy ho an'ny mpanolo-tsaina ve
Mihamatanjaka kokoa ny tolotra fitadiavana amin'izao fotoana izaodraharaha matotra, indrindra ho an'ny fampiroboroboana ireo tarehimarika ara-barotra takiana ho an'ireo mpampiasa farany.Satria ny ankamaroan'ny olona dia maniry ny hanome toky fa tsy misy solosaina fotsiny, ny vahaolana eran-tanyNy fanadihadiana dia andrasana hivoatra bebe kokoa amin'ny alalan'ny 3-5 taona. Izany no mahatonga ny SASdia nanjary fanta-daza amin'ny fidirana amin'ny orinasa. Na izany aza, araka ny hevitry ny matihaninany mpitrandraka Semalt, mbola manana fomba lavitr'ezaka handeha ianao.
Raha ny marina dia fandaharana manokana amin'ny SAS nyAnisan'ny fiteny tsotra indrindra hianarana, indrindra ho an'ny olona izay efa manana fototrafahalalana ny C / C ++. Mandritra izany fotoana izany, SAS dia manome sehatra goavana ho an'ny freshers, satria ny lionaMizara ny banky, ny orinasa ara-bola, ary ny orinasam-pitsaboana manohana azy iotahiry isan-karazany, fanaovana analytics sy ny tsenan'ny fandraharahana. Ny zavatra dia, ny fiteny mihitsyTsy mila fahalalana na fahaizana matanjaka amin'ny fandaharana. Raha voatokana ho an'ny logic ny sainaoNa ianao mihazakazaka manao famakafakana ary mianatra amin'ny fotoana iray ihany, dia tsy tokony hifampiraharaha amin'ny SASdia sarotra loatra. Ankoatra izany, afaka misafidy foana ny rafitra mety indrindra ianao amin'ny fanaovana ny anaosafidy eo amin'ny rindrambaiko mifototra amin'ny fitaovana sy coding.
Ny zavatra voalohany tokony hataon'ny freshersdia mifantoka amin'ny Base SAS. Raha ny fehezan-dalàna, ny iray dia hahazo fahatakarana voalohanyantontan'isa, izay tokony ilaina amin'ny fianarana fomba fanabeazana modely. Aorian'izay,Rehefa tafiditra ao anaty fiara iray ianao dia ho afaka hamaha ny sainao amin'ny faranydraharaham-pahalalana tanteraka sy saro-takarina. Mba hahazoana antoka fa maharitra ny fahaiza-manaonaoMitombo hatrany, dia hanana teknika vaovao sy hevitra vaovao hijerena foana ianao..Izany no antony tsymieritrereta indroa alohan'ny hanombohanao hianatra SAS, na dia mahatsiaro kely aza ianao amin'ity raharaha ity.
Nangatahana ny SAS?
Na dia niaiky fa tsy toy ny open sourcerafitra, SAS dia rindrambaiko nahazoan-dàlana, ny mpahay siansa sy mpandrindra ny data dia mbola eo an-tampon'ny fangatahana, satria:
Fifandraisana tsara amin'ny ankapobenylalàna ara-dalàna, ary mijoro eo ambonin'ireo fitaovana hafa momba ny fiarovana, dia mbola tena nilaina ny SAS androanyho an'ny fiarovana ny fiarovana noho ny teo aloha
Voaporofo ny fandaharana SASny fahaiza-manaon'ny Big Data ary ny mety tsara ho an'ny SAS JMP, sy ny Visual Analytics
Mandray soa amin'ny fomba tsara kokoafanatsarana, SAS dia mahomby kokoa amin'ny fampiasana ireo tahirin-kevitra mifandraika amin'ny tombony azo avy amin'nyrafitra ara-bola sy banky
Ahoana no hialana amin'ny fahaiza-manaon'ny SAS?
Ankehitriny dia misy fifaninanana feno herisetra mihatrany faritra rehetra ao amin'ny SAS, manomboka amin'ny tena fotokevitra, mankany amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fanadihadiana. Na izany aza, misyManana tombony be dia be ny vidin'ny ezaka ataonao. Mba tsy hisian'ny asa tsara amin'ny orinasa, tsy voateryFantaro fotsiny ny zava-drehetra. Ny tena ilainao dia ny mahafantatra teknolojia iray manokana ho an'ny sasany manokanadiplaoma, izay mikatsaka ny ankamaroan'ny orinasa.
Fa ny fomba hananganana ny tena fiasanaotoe-javatra eo ambonin'ny mpifaninana? Inona no tokony hatao mba hanamboarana ny valisoa sy ny liberaly indrindrampampiasa? Misy fahafahana bebe kokoa noho ny hita. Ohatra, i Semalt dia manam-pahaizanampandraharaha sy mpandraharaha amin'ny tranokalam-baovao hanampy anao hampitombo ny fahafahanao miasamanolotra ny fahaiza-manaonao mivantana amin'ireo mpamaky lehibe indrindra manerantany ny SAS. Semaltdia manana traikefa amin'ny fanampiana ireo tanora manam-pahaizana SAS mba hampiroborobo ny tolotr'izy ireo ao anatin'nypejy fandraisana na horonan-tsary , ,izay nahatonga ny sain'ny mpampiasa.
Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana,Ity no tsara indrindra ho an'ny mpandrindra fampisehoana mba hanehoana ny fahaiza-manao sy ny mialoha ireo mpifaninana rehetra.
Ny teboka dia ny fandaharana SASdia anisan'ireny andraikitra ara-teknika ireny amin'izao fotoana izao. Mieritreritra ve ianao?Tianao ve ny hametraka ny traikefa mora indrindra aminao (ohatrinona ny famahana olana, fifandraisanaary ny fampiofanana, ary koa ny tetikasa sy ny fahaiza-mitantana amin'ny fitantanana)? Izay rehetra ilainaodia ny maka ny karipetra mena hivoaka mba hitenenana. Vantany vao ren'ny olona ao amin'ny Internet, nyIreo mpampiasa ambony indrindra manerantany dia hanomboka ady amin'ny fifaninanana amin'ny fampiasana ny fangatahana sarobidy indrindra arytolotra tsara ho an'ny tanjona tokana - hahazoana tombontsoa amin'ny fampandraisana anjara ny fahaizanao amin'ny raharahany.Ary ho anao irery ihany, izay safidy hodinihina. Tsarovy, ny zava-niainanao ankehitriny SASdia tsy mihoatra noho ny vidiny ho an'ny fikojakojana azy io na dia andro iray aza!